पीसीआर औषधि होइन । बुझेर वा नबुझेर पीसीआर बढाउनु पर्ने भनिरहेका छौं । खाना नपाएका मान्छे बिरामी भएका छन् । भएका स्रोत साधनले नभ्याउने गरी पीसीआर गर्न सकिदैन । पीसीआर परीक्षणले आजको अवस्थामात्रै जनाउँछ । औषधिको काम त गर्दैन । एकपटक कोही मान्छेको पीसीआर गरेर समुदायमा गएपछि फेरि संक्रमण नहोला भन्न सकिदैन । थानकोट नाकामा १० हजारको पीसीआर गराएको छ । खर्च कति होला ? हामी डिफेन्सिभ होइन कि अफेन्सिभ भएर जानुपर्छ ।
सत्याग्रह बसेर पीसीआर बढाउ चाहिँ भन्ने अनि मान्छे भेला गराउँदा रोग फैलिदैन ? पीसीआर गर्दा हाम्रै पैसा जाने हो । हेर्दा सरकारको खर्च भएजस्तो हुन्छ । सरकारको पैसा भनेको हाम्रै हो । त्यसैले दुरुपयोग गर्नुहुँदैन । पीसीआर बढाएरमात्रै हुँदैन । यो नै रोगको निदान होइन । एकजनाको पीसीआर गर्दा १० हजार खर्च हुन्छ रे । त्यसैले धेरै पीसीआर गराएर राज्यको खर्च नगरौं ।
बाहिरबाट हेर्दा त संक्रमित पत्ता लगाउने देखि व्यवस्थापन गर्नेसम्मको सबै काम संघले गरेको देखिन्छ । जनताले त हाम्रो मेयरले केही गरेनन् भनेर खोज्नुपर्ने अवस्था छ । तपाईले महानगरबासीको लागि चाहिँ के गर्नु भयो ?
कोरोना संक्रमण नियन्त्रण गर्न सबैभन्दा १० करोडको कोष काठमाडौं महानगरले बनाएको हो । त्यसबेला काहीे पनि भोकै बस्नु पर्दैन भनेका थियौं । लकडाउनमा कसैले भोकै बस्नु परेन । काठमाडौं महानगरले संघ र प्रदेशसँग बजेट मागेको छैन । हामी आफैं गरिरहेका छौं । सुरुको दिनमा जनचेतना जगाउने काम गर्‍यौं । मास्क र स्यानिटाइजर प्रयोग गर्न सिकायौं । ठाउँ ठाउँमा पानी ट्याङकीको व्यवस्था गर्‍यौं । डिस्इन्फेक्सन छयाप्छ्याप्ती बनायौं । घरघरमा राहत बाड्यौं । कुनै घर पनि छुटाएनौं । सरकारसँग हात फैल्याएनौं । प्रदेश र संघले निर्णय गर्दा हाम्रो सहभागिता छ ।
काठमाडौंलाई बचाउन संघ र प्रदेशका मन्त्रीलाई भेटेका छौं । सीसीएमसीको बैठकमा सहभागि भएका छौं । काठमाडौंमा दैनिक आवतजावत हुन्छ । त्यसको लगत हामीले राख्न सक्दैनौं । बाहिर मान्छे आउँदा मैले चाहेर पनि सकिदैन । संघीय सरकारलाई गुहार्नुपर्ने हुन्छ । अझ काठमाडौं छिर्ने नाका मेरो क्षेत्र होइन । नागढुङ्गामा अर्कै मेयर छन् भक्तपुरको नाकामा अर्कै मयर । विभिन्न जिल्लाबाट गाडीमा ल्याएर नाकामा छाड्दिने अनि त्यहाँको मेयरलाई गाली गरेर केही हुँदैन । जिल्लाबाट रोक्नु पर्छ । बाहिरबाट आउने मान्छेलाई हामीले रोक्न सक्दैनौं । संघीय सरकारकै भर पर्नु पर्ने हुन्छ । संक्रमित अवस्थामा जो जहाँ छन् त्यहीं बसेर सहयोग गरिदिनुस् । गृह प्रशासन हाम्रो मातहतमा छैन । यो कुरा नबुझ्दा मेयरले केही गरेन भन्ने बुझाई भएको हो । सबैसँग सहकार्य र समन्वय गरेर चलाउनु पर्ने हुन्छ ।
कतिपय निर्णय क्याबिनेटले गर्छ । पछिल्लो समय कोरोना सम्बन्धी निर्णय क्याबिनेटभन्दा पनि सीसीएमसीले गरिरहेको छ । जिल्लामा डीसीएमसीले निर्णय गर्छ । जुन बैठकमा हामी पनि सहभागि हुन्छौं । उहाँहरुले गरेको निर्णय मैले नमान्ने होइन । ऊ को हो र भन्ने होइन । डीसीएमसीले गरेको निर्णय सबैले मान्नुपर्ने हुन्छ । जसले जे निर्णय गरे पनि सिंगो काठमाडौं बचाउन गर्ने हो । राम्रो निर्णय जसले गरे पनि कार्यान्वयन गर्न सघाउनुपर्छ । मैले गरेको निर्णय पनि गृह प्रशासनले कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । गृह प्रशासनले गरेको पनि हामीले कार्यान्वयन गर्नुपर्ने हुन्छ ।
कति जनालाई क्वारेन्टाइनमा राख्ने ? दैनिक लाखौं व्यक्ति आउँछन कसरी व्यवस्थित गर्न सकिन्छ ? काठमाडौंमा खुला ठाउँ छैन । क्वारेन्टाइन बनाउने ठाउँ कहाँ छ ? हरेक वडामा क्वारेन्टाइन बनाउने होइन । टाढा खुला ठाउँमा बनाउने र खर्च हामी मिलेर गरौं भन्ने मेरो मान्यता हो । कसले के गर्‍यो गरेन भन्दा पनि सुरक्षित हुन अपनाउनुपर्ने सतर्कता र मापदण्ड पालना गरौं ।
(कान्तिपुरका मकर श्रेष्ठले महानगरपालिका मेयर एवं उपत्यका मेयर फोरमका संयोजक विद्यासुन्दर शाक्यसँग गरेको कुराकानी साभार गरिएको हो ।)